कसरी बकार्याट खेल्ने - UK 2021 ✅
Home » क्यासिनो खेलहरू » ब्याक्र्याट » कसरी बकार्याट खेल्ने
दिमागमा राख्नको लागि आधारभूत नियमहरू
यो खेल कसरी सुरु भयो?
किन हामी ब्याक्र्याटको खेल सिफारिस गर्दछौं
ब्याक्र्याटको खेलको लागि भुक्तान तालिका
कसरी कार्डहरू पढ्नुहोस् र मूल्यवान छन्
बेकर्ट तालिकाहरूको लोकप्रिय आकार जुन तपाईंलाई थाहा पाउनुपर्दछ
तेस्रो कार्ड संचालन गर्ने नियमहरू के-के हुन्?
महत्त्वपूर्ण चीजहरू जुन तपाईंलाई घरको किनारका बारे थाहा हुनुपर्दछ
के त्यहाँ एक सम्भाव्यता छ कि तपाईंले%% भन्दा कम तिर्नुहुनेछ?
यदि तपाईं ब्याक्र्याटको खेलमा नयाँ हुनुहुन्छ र नियमहरू जान्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले सही पृष्ठ फेला पार्नुभयो। ब्याक्र्याट एक सजिलै टेबुल गेमहरू खेल्नको लागि हो र सही मार्गनिर्देशन र संसाधनहरूको साथ, तपाईं सजिलैसँग मास्टर गर्न सक्नुहुन्छ र टेबुलमा जीत सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँलाई यस खेल पत्ता लगाउन मद्दतको लागि, खेल सूचीबद्ध गर्दा दिमागमा राख्नको लागि तल दिइएका केहि आधारभूत नियमहरू छन्।
सबै बाजी लगाए पछि, दुई हातहरू दुई कार्डसँगै व्यवहार गरियो। यिनीहरूलाई बैंक र प्लेयर हातहरू भनेर चिनिन्छ
खेलको मुख्य उद्देश्य भनेको ती दुई मध्ये कुन कुनको to to मा नजिकको मान छ भनेर अनुमान गर्नु हो
सहभागी खेलाडीहरूले आफ्ना पैसा कि त प्लेयर, टाईको बैंकरमा राख्न सक्छन्
दसौं र अनुहार कार्डहरू (किंग्स र क्वीन्स) शून्यका रूपमा गणना गरिन्छ, र डेकमा अन्य कार्डहरूले उनीहरूको अनुहार मान लिनेछ।
यदि हातको गन्ती than भन्दा बढी छ भने, कुल १० हटाएर समायोजित हुन्छ
विशिष्ट नियमहरू ठाउँमा हुन सक्छन् जुन प्लेयरको हात वा बैंकले तेस्रो कार्ड प्राप्त गर्दछ भने निर्धारण गर्दछ
यदि एक खेलाडी एक विजेता हात मा दांव, उसले एक १ गर्न १ payoff प्राप्त गर्नेछ
यदि एक खेलाडीले बैंकमा दांव दिन्छ र जीत गर्छ, उसले उही समान भुक्तानी पाउँछ तर उसले%% कमिसन पनि कभर गर्नुपर्दछ
यदि एक खेलाडी टाईमा दगुर्छ र जीत गर्छ भने, भुक्तानी to देखि १ छ
यदि तपाईंले जेम्स बान्ड चलचित्रहरू देख्नु भएको छ जहाँ मुख्य चरित्रले ब्याकराटको खेल खेल्छ, तपाईंले पक्कै याद गर्नुहुनेछ कि खेल कति सुन्दर र गम्भीर छ। जबकि यो वास्तवमै विशिष्ट र अधिकतर उत्साहीहरु द्वारा खेलाइएको छ, यो खेल खेल्न सजिलो छ र पनि एक उत्तम घर किनारा अनलाइन प्रस्ताव।
आधुनिक ब्याक्र्याटले यसको जरालाई ‘ब्याकरा’, इटालियनमा ट्रेस गर्दछ। स्थानीय भाषामा, यसले शून्यलाई जनाउँछ। १ France०० को अवधिमा खेल फ्रान्स र इटालीमा लोकप्रिय भयो। धेरै स्रोतका अनुसार यो कार्ड खेल फ्रान्सेली रोयल्टीको लागि मनपर्ने मनोरञ्जन पनि थियो। जे होस्, यो खेल फ्रान्समा १ 1837। मा गैरकानुनी बनाइए पनि यस खेलको लोकप्रियता कहिलै पनि घट्न सकेन र अझै पनि साधारण मान्छेहरू र कुलीनहरूले खेले। यो विभिन्न प्रकारका खेलाडीहरूको निरन्तर संरक्षणले खेल फस्टाउनको लागि सक्षम गर्‍यो र यो अब सबैभन्दा लोकप्रिय टेबल गेमहरूमध्ये एक हो।
यसको ईतिहास भरमा, खेलका विभिन्न प्रकारहरू विकास गरिएको छ। खेलको केहि लोकप्रिय भेरियन्टहरू हुन् पुन्टो बान्को, चेमिन डे फेयर र ब्याकार्ट बान्के। यी सबै खेलहरूले समान आधारभूत नियमहरू साझा गर्दछ जुन एक प्रमुख भिन्नतासँग- जसरी कार्डहरू व्यवहार गरिन्छ। यी तीन संस्करणहरू मध्ये, उद्योगमा सबैभन्दा भर्खरको थप पन्टो बान्को हो।
यो नोभेम्बर २०, १99 on मा प्रस्तुत गरिएको थियो, र टामी रेन्जोनीले पहिलो पटक लास भेगासमा खेलेको र लोकप्रिय भएको थियो। उनले सुरुमा क्युवाको क्यापरी क्यासिनोमा यो खेलको परिचय गराए, र केही ध्यान पाए पछि, खेल चिमटे र औपचारिक रूपमा लास भेगासमा शुरू भयो। जब यो खेल सुरु भयो र लस भेगासमा खेलाइएको थियो, खेलाडीहरू मोहित भए र उनीहरूले चाँडै खेल अनुसरण गरे। यस क्षेत्रका अन्य क्यासिनोहरूले चाँडै पछ्याए, र यसरी पुन्टो बैन्कोको लोकप्रियता सुरु भयो।
त्यहाँ थुप्रै विश्वस्त कारणहरू छन् जुन तपाईंले यस लोकप्रिय टेबल गेम सिक्नुपर्दछ र खेल्नु पर्छ। तल सूचीबद्ध गरिएका केहि कारणहरू छन् जुन तपाईंले यो खेल खेल्नुपर्दछ:
नियम जटिल छैनन् र तिनीहरूलाई सम्झन सजिलो छ
एक अनौंठो अनौठो अनलाईनमा घमण्ड गर्दै, ब्याकराटको खेल अनौपचारिक खेलाडीहरू र शुरुवातकर्ताहरूलाई अपील गर्न सक्दछ
यो तालिका खेल सबै प्रकारको सट्टेबाजी स्तरहरूको लागि उत्तम हो, र VIP प्लेयरहरूलाई पनि अपील गर्न सक्दछ अधिकतम मानहरू शर्त लगाउन
अब तपाईं प्रतिष्ठित अनलाइन क्यासिनोमा अनलाइन ब्याक्र्याट खेल्न सक्नुहुन्छ
ब्याक्र्याटको खेलमा त्यहाँ तीन सम्भावित परिणामहरू छन् र प्रत्येक फरक भुक्तानी तालिकाको साथ आउँदछ। तपाईंले ब्याकरेट तालिकामा हिट गर्नु अघि र वास्तविक पैसाको लागि खेल्नु अघि, तपाईंले भुक्तानी बुझ्नु महत्त्वपूर्ण छ।
यदि तपाइँ प्लेयरको हातमा शर्त लगाउनुहुन्छ र जीत गर्नुहुन्छ, भुक्तानी १: १ मा तालिकाबद्ध गरिएको छ। यसको मतलब यो हो कि यदि तपाइँ $ २० मा शर्त लगाउनुहुन्छ र तपाइँ जित्नुभयो भने, तपाइँ win २० सँग मिल्छ।
यदि तपाइँ बैंकको हातमा शर्त लगाउनुहुन्छ र जीत गर्नुहुन्छ, भुक्तानी १: १ मा पनि सेट गरिएको छ तर यो%% कमिसनको साथ आउँदछ। यो १ to देखि २० भुक्तानको रूपमा प्रतिबिम्बित हुन्छ। जब एक खेलाडीले $ १० बेट्स गर्छ, तब उसले $ $ .० पाउनेछ।
यदि तपाईं एक राम्रो भुक्तानी आफ्नो दिन अन्त्य गर्न चाहानुहुन्छ, त्यसो भए तपाईं एक ‘टाई’ खेल्नु पर्छ। ब्याक्र्याटको खेलमा टाई 8 देखि १ को भुक्तानी गर्व गर्दछ। यसको मतलव तपाईले सबै ch चिप्स पाउनुहुनेछ र जीतको भागको रूपमा सक्कली चिप राख्नुहुनेछ। यदि तपाईं यस नतीजामा $ १० राख्ने निर्णय गर्नुहुन्छ र जीत जित्नुहुन्छ भने, तपाईंले $ plus० कमाउनुहुनेछ वास्तविक ब्याजरले बनाएको। दिमागमा राख्नुहोस् कि टाईको बखत दुबै खेलाडी वा बैंकरमा शर्त एक धक्का हो, जसको मतलब न कि हार्छ वा न जीतन्छ। जब खेलले यस नतिजालाई रेकर्ड गर्दछ, तपाईंलाई अर्को शर्त कसरी खेल्ने भन्नेमा विभिन्न विकल्पहरू दिइन्छ। तपाईं चिप्स थप्न वा हटाउन सक्नुहुन्छ, वा तिनीहरूलाई तालिकाबाट हटाउन सक्नुहुन्छ।
यस खेलमा, आठ वा छ डेक कार्डहरू प्रयोग गरिन्छ र जुत्ताबाट डिल गरिन्छ। प्रत्येक कार्ड एक संख्यात्मक मान तोकिएको छ, तल वर्णन गरिए अनुसार:
चित्र कार्ड (किंग्स, क्वीन्स, र ज्याक्स) र टेन्स (१० सेकेन्ड) ० को मान दिइन्छ
ऐसको मूल्य १ हुन्छ
२ से s सेकेन्ड सम्म उनीहरूको अनुहार मान लिन्छ
यो कार्ड खेलमा, हातको लागि उच्चतम मान is हो। यदि एक हातको मूल्यले यो संख्या भन्दा बढि छ भने, यो दुई मध्ये एक तरीकाले समायोजित हुनुपर्छ। एक, तपाईं केवल योग को पहिलो अंक ड्रप। उदाहरण को लागी, यदि मान १ is हो, केवल ‘१’ ड्रप गर्नुहोस् जसले hand को समायोजित हात मूल्य प्रकट गर्दछ। र दुई, तपाईं केवल हात कुल बाट १० घटाउन सक्नुहुन्छ।
आज तीनवटा लोकप्रिय आकारहरू छन् जुन अहिले प्रयोग भैरहेका छन्: पूर्ण आकारको पन्टो बैन्को बेकराट, मिमिनी-बेकार्टान्ट मिडी बेकार्ट। यी सबै ब्याक्र्याट टेबुलहरू खेल्नको लागि समान नियमहरू राख्छन्। भिन्नता खेलाडीहरूको संख्या, कार्डहरूको कारोबार र अनुमति शर्त सीमामा निहित छ। यहाँ छिटो हेर्नुहोस् कसरी विभिन्न बेकार्याट तालिका आकारहरू।
पूर्ण आकारको पन्टो बान्को
बिग बेकाराटको रूपमा पनि चिनिन्छ, यो टेबल प्राय: जसो कोठा वा उच्च-सीमाको खाडलमा देखा पर्दछ। पूर्ण आकारको तालिकाको रूपमा, यसले १ players खेलाडीहरू समायोजन गर्न सक्दछन् र प्रायः सबै भन्दा बढी बेटि limits सीमा हुन्छन्। यदि तपाईं लास भेगास स्ट्रिपमा एक लोकप्रिय क्यासिनोमा खेल्नुभयो भने, तपाईं एउटा टेबुलमा खेल्नुहुनेछ जुन दांव फिचर गर्दछ जुन कम $ १०० देखि $ १००,००० सम्म उच्च हुन्छ।
यहाँ, खेलाडीहरूले कार्डहरू ह्यान्डल गर्नेछन्, र बैंकमा सबैभन्दा ठूलो दांव भएको खेलाडीलाई अक्सर बैंकर कार्डहरू पल्टाउने मौका दिइन्छ, र उही प्रक्रिया प्लेयरको हातमा सबैभन्दा ठूलो ब्याटेरमा लागू हुन्छ। परम्परागत रूपमा, उच्च रोलरहरू वा वीआईपी प्लेयरहरू कहिले काँही क्रुम्बल हुने वा कार्डहरू बर्न गर्दा अनुमति दिईन्छ। यदि यो हुन्छ भने, डिलर (क्यासिनो) सफ्फल शुरू हुनु अघि कार्डको नयाँ सेट शुरू गर्दै समाप्त हुन्छ।
यो पूर्ण आकारको ब्याक्र्याटको विपरित हो र प्रत्येक टेबलमा or वा players खेलाडीहरू राख्न सक्छ। र यो कम स्टेक्स ब्याक्र्याट तालिका भएको कारण, खेल्न चाहने इच्छुक खेलाडीहरूले किफायती न्यूनतम सट्टेबाजी सीमाहरूको मजा लिन सक्छन् जुन $ to देखि १$ डलरसम्म हुन्छ, अधिकतम bet 5,000 सम्मको शर्तको साथ। यहाँ, केवल एक डिलरले कार्यलाई सजिलो बनाउँदछ र खेलाडीहरूलाई कार्डहरू ह्यान्डल गर्ने अधिकार दिईदैन। किनकि यसले थोरै खेलाडीहरू समावेश गर्दछ र डीलरले खेलको पूर्ण नियन्त्रण लिन्छ, कार्य प्राय छिटो हुन्छ।
यो ब्याक्र्याट तालिका players खेलाडीहरू सम्म सिट गर्न सक्दछ र एक डीलर द्वारा खेल सुविधाजनक छ। खेल मिनी-ब्याक्र्याट तालिकाको तुलनामा त्यति छिटो हुँदैन तर पूर्ण आकारको तालिकाको तुलनामा कार्य धेरै उत्तम हुन्छ। यस तालिकाको लागि शर्त सीमा कम $ २$ सम्ममा हुन सक्छ र $ १००० सम्म जान सक्छ। संक्षिप्तमा, यो तालिका पूर्ण आकार र मिनी-ब्याकरेट तालिकाको बीचमा बस्दछ।
ब्याकार्टको मानक खेललाई दुई कार्ड चाहिन्छ तर उदाहरणहरू छन् जब तेस्रो कार्ड जारी हुन सक्छ। केहि खेलाडीहरू सोच्न सक्छन् कि नियमहरू जटिल छन्, तर ती छैनन्। याद गर्नुहोस् कि त्यहाँ नियमहरू छन् जुन प्लेयर र बैer्करको तेस्रो कार्डमा शासन गर्दछ। यहाँ तेस्रो कार्ड कसरी दिइन्छ भन्ने बारे नियमहरूमा छिटो हेर्नुहोस्।
प्लेयरको तेस्रो कार्डको लागि नियमहरू
तेस्रो कार्ड ड्राइंगको आधार पहिलो दुई कार्डको मूल्यमा निर्भर गर्दछ।
खेलाडीले तेस्रो कार्ड पाउने छ पहिले दुई कार्डको मूल्य ० देखि from सम्म
प्लेयरले पहिलो दुई कार्ड राख्छ यदि मान6भन्दा बढि छ
यो जान्नु महत्वपूर्ण हुन्छ कि के हुन्छ यदि पहिले दुई कार्डको मूल्य9वा is छ। ब्याक्र्याटको खेलमा, यी मानहरूलाई ‘प्राकृतिक’ भनिन्छ, र जब यो हुन्छ, हातले तेस्रो कार्ड तान्न वा प्राप्त गर्न अनुमति दिँदैन।
बैंकरको तेस्रो कार्डका लागि नियमहरू
नियमहरू बैंकरको तेस्रो कार्डमा थोरै जटिल छन्। तेस्रो कार्ड जारी गर्नु निम्न गाईडको अधीनमा छ:
पहिलो दुई कार्ड कोर्ति मान
प्लेयरले तेस्रो कार्ड पायो वा स्ट्यान्ड
प्लेयरको तेस्रो कार्डको मूल्य
दिमागमा यी गाईडहरूसँग, तपाईंले निम्न नियमहरूमा ध्यान दिनुपर्दछ:
यदि पहिलो दुई कार्डको मूल्य ० देखि २ छ भने तेस्रो कार्ड कोरिन्छ
हात खडा छ यदि मान or वा reaches मा पुग्छ जुन ब्ल्याकज्याकको खेलमा ‘प्राकृतिक’ मानिन्छ
हात खडा छ यदि पहिलो दुई कार्डको मान। हो। समान नियम लागू हुन्छ यदि मान6छ प्रदान गरीन्छ कि प्लेयर हानले तेस्रो कार्ड प्राप्त गरेन
यदि पहिलो दुई कार्ड3देखि range सम्म दायर र प्लेयर ह्यान्डले तेस्रो कार्ड पायो भने, बैंक ड्र draw वा स्ट्यान्ड गर्न सक्दछ
क्यासिनो जुवामा, घरको किनारा खेलाडीहरू भन्दा बढि क्यासिनो अपरेटरको फाइदाको लागि हुन्छ। छोटकरीमा, खेलाडीहरूले आशा गर्नुपर्दछ कि क्यासिनोहरूले सँधै खेलाडीहरू माथि किनारा राख्छन् किनभने यस प्रकारको मनोरन्जन अझै पनि व्यवसाय मानिन्छ। राम्रो समाचार यो छ कि ब्याक्र्याट को खेल उद्योग मा सबै भन्दा राम्रो बाधा को एक प्रदान गर्दछ। त्यसोभए ब्याकरेट घरको किनारा छ जुन तपाईंले वास्तविक पैसाको लागि खेल्दा तपाईंले अपेक्षा गर्नुपर्दछ? तल एक उदाहरण हो, एक–डेक खेल प्रयोग गरेर, १: १ भुक्तानी विजेताको लागि र बैंक ह्यान्डको लागि, commission: १ तिर्ने टाईको साथ आयोगको लागि अतिरिक्त%%।
बैंकले 45 45..87% जित्नेछ, .6 44..63% गुमाउँछ र बाँकी ‘टाई’ को लागी
प्लेयरको हातले .6 44..63% समय जित्यो, 45 45..87% गुमाउँछ र बाँकी ‘टाई’ को लागी
यदि हामीले टाईलाई नतिजाबाट हटायौं भने बैंकले .6०. %8% जित्छ र सबै हातले खेलेको 49 .3 ..3२% हराउनेछ। प्लेयरको हातले played .3 ..3२% जित्यो र खेलेको सबै हातले 50०..68% गुमाउनेछ।
माथिको माथिको उदाहरण प्रयोग गरेर, तपाईंले नोट गर्नुहुनेछ कि बैंकले प्राय जसो समय जित्नेछ यदि टाई इक्वेसनबाट हटाईयो भने। यो एक कारण यो छ किन त्यहाँ%% कमिसन प्लेयर विरुद्ध चार्ज गरिएको थियो जसले बैंक छनौट गरेर जित्यो।
केहि खेलाडीहरू र ब्याक्र्याटको खेलमा शुरुवातकर्ताहरूको लागि,%% कभर गर्नको लागि ठूलो रकमको रूपमा लिइन्छ। अब यो पनि सम्भव छ कि तपाईले मानक%% भन्दा कम भुक्तानी गर्नुभयो जुन सबै अनलाइन क्यासिनोहरूले चार्ज गर्दैछन्? हो, यो सम्भव छ यदि तपाईलाई ब्याक्र्याटको खेल कहाँ खेल्ने भनेर थाहा छ। उदाहरणहरू छन् जब क्यासिनोले बैंकको विजेता हातमा केवल%% कमीशनको लागि सोध्नेछ। तपाईले अनलाइन क्यासिनोहरूको संख्या पनि फेला पार्नुहुनेछ जसले कम कमिशनहरू प्रस्ताव गर्दछ, र चाल भनेको अनुसन्धान गर्न र यी अपरेटरहरूलाई खोजी गर्दछ जुन खेलाडीहरूलाई अनुकूल छ। यदि तपाईं एक अनलाइन क्यासिनो फेला पार्न सक्नुहुनेछ जुन%% भन्दा कम चार्ज गर्दछ, त्यसो भए यो क्यासिनोले मानक शुल्क लगाउनु अघि तपाईले यो प्रस्तावको फाइदा लिनु महत्त्वपूर्ण छ।
ब्याक्र्याट सबैभन्दा लोकप्रिय तालिका गेमहरू मध्ये एक हो जुन उत्तम अनौंठोको प्रस्ताव गर्दै छ
यो तालिका खेल ‘baccara’, एक इटालियन खेल शून्यको अर्थबाट प्रेरित छ
त्यहाँ तीन सम्भावित परिणामहरू छन् जुन यो खेलमा हुन सक्दछ र यी शर्तहरू बनाउन सकिन्छ जुन बनाउन सकिन्छ। खेलाडीहरूले प्लेयर ह्यान्ड, बैंक ह्यान्ड वा टाईमा शर्त खेल्न सक्छन्
यस खेलको मुख्य उद्देश्य कुन हातले9नजिकको मानको साथ समाप्त हुन्छ पहिचान गर्नु हो
त्यहाँ तीन अलग आकारको बेकार्याट तालिका छन् जुन अनलाइन वा ईंट-र-मोर्टार क्यासिनोमा खेल्न सकिन्छ। खेलाडीहरूले मिनी-ब्याकरेट, मिडी-ब्याकरेट र पूर्ण आकारको ब्याकरेट तालिकाबाट छनौट गर्न सक्दछन्।
यी तीन प्रकारको ब्याक्र्याट टेबले समान सामान्य नियमहरू साझा गर्दछ तर शर्त सीमाका सर्तहरूमा फरक पर्न सक्छ, खेलाडीहरूको स that्ख्या र समायोजन हुन सक्ने अन्य विशेष नियमहरू
तपाईले मुख्य क्यासिनोको लबीमा मिनी-ब्याकरेट तालिकाहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ र यी टेबुलहरू कम दांवका लागि परिचित छन्, प्राय $ starting मा सुरु हुन्छ। साथै, मिनी-ब्याकरेट तालिकाले एक पटकमा to देखि players खेलाडीहरू पनि सेवा दिन सक्छ
मिडी-ब्याक्रेट तालिकामा, एक पटकमा9जना खेलाडीहरूले भाग लिन सक्छन्। साथै, दांव र शर्त सीमा मिनी-ब्याकरेट तालिकाको तुलनामा यहाँ धेरै छ। यस तालिकामा, खेलाडीहरूलाई उनीहरूको कार्डहरू ह्यान्डल गर्न अनुमति छ
पूर्ण आकारको ब्याक्र्याट तालिका सब भन्दा ठूलो र उत्साही र VIP प्लेयरहरू बीच लोकप्रिय हो। यो तालिका एक पटकमा १ 14 खेलाडीहरू समायोजन गर्न सक्दछ र दांव र शर्त सीमा अधिक हुन्छ। खेलाडीहरूले यस प्रकारको ब्याक्र्याट तालिकामा एक पटकमा १०,००,००० सम्म शर्त लगाउन सक्छन्। यो तालिका प्राय: वीआईपी सेक्सनमा वा उच्च-रोलर पिटमा देखीन्छ
यदि तपाइँ प्लेयरको हातमा शर्त लगाउनुहुन्छ र जीत गर्छ भने, भुक्तान १: १ मा पेग हुन्छ
यदि तपाइँ बैंकको हातमा शर्त लगाउनुहुन्छ र जीत गर्छ भने, भुक्तान १: १ मा पेग हुन्छ तर खेलाडीले%% कमिसन कभर गर्नुपर्दछ। त्यहाँ केही क्यासिनो छन् जुन यो रकम वा प्रतिशत भन्दा कम शुल्क लगाउन सक्छ। यदि तपाइँ टाईमा शर्त लगाउनुहुन्छ र जीत गर्नुहुन्छ भने, भुक्तानी 8: १ मा पेग हुन्छ
कार्डले बिभिन्न मान लिन सक्छ। उदाहरण को लागी, 9s को लागी 2s आफ्नो अनुहार मानहरु लाई मान्नेछ, जबकि अनुहार कार्ड र दशौं शून्य मान। Ace ले १ को मान मान्दछ
खेलको सुरूको बखत त्यहाँ दुईवटा कार्डहरू छन् जुन बैंक र प्लेयर हातहरूलाई दिइनेछ। तेस्रो कार्ड कोरिन सक्छ तर यो विशिष्ट नियम र सर्तहरूको विषय हो
खेलको उद्देश्य9को नजिकको एक हात मूल्य प्राप्त गर्नु हो। यदि हात मान than भन्दा बढि छ भने, मान दुई दृष्टिकोणहरू प्रयोग गरेर समायोजित गर्नुपर्छ। सब भन्दा लोकप्रिय तरीका भनेको केवल पहिलो अंक मात्र ड्रप गर्नु हो। उदाहरणको लागि, १ of को मानले hand को एक अद्यावधिक हात मूल्य नेट गर्नेछ
यदि सम्बन्ध गणनामा समावेश गरीएको छैन भने, बैंकको हातले हराएको भन्दा बढी जित्न सक्छ
यदि सम्बन्ध गणनामा समावेश गरिएको छ भने, बैंकको हातको लागि घर किनारा १.०6%, टाईको लागि १.3.66% र प्लेयरको हातका लागि १.२24% हुन्छ।
ब्याक्र्याटको लागि घर फाइदा १.२% अनुमान गरिएको छ, जुन क्यासिनो उद्योगमा सबैभन्दा कम मानिन्छ